बिष्णु माझिलाई फेल खुवाउने आवाज ! भिडियो हेर्नुस आफै थाहा हुनेछ ( भिडियो) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Videos/बिष्णु माझिलाई फेल खुवाउने आवाज ! भिडियो हेर्नुस आफै थाहा हुनेछ ( भिडियो)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला । महोत्तरी, ०२ भदौ । को भिड–१९ स ङ्क्रमण ह्वात्तै बढेपछि महोत्तरीमा १० दिनसम्मलाई क र्फ्यु नि षेधाज्ञा आदेश जारी भएको छ । सोमबार ९भदौ १० मध्यरातदेखि लागू हुने गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाकोे मुख्य बजारक्षेत्र र छिमेकको महोत्तरी गाउँपालिकाका वडा नं ३ र ५ मा मात्र गत साउन २१ गतेदेखि पटकपटक गरी नि षेधाज्ञा जारी गर्दै आएको थियो ।
पछिल्ला केही दिनयता जिल्लाका सबैजसो भेगमा स ङ्क्रमण निकै बढेको हुँदा यसलाई रो कथामका लागि आवागमन रोक्न जिल्लाभरि नै नि षेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले सोमबार साँझ जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
जिल्लास्थित को भिड–१९ स ङ्क्रमण व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयानुसार जिल्लाभर नि षे धाज्ञा जारी गरिएको हो । अत्यावश्यक काम र निर्माणकार्यलाई अ वरोध नपुग्ने गरी भदौ १० मध्यरातसम्मलाई नि षेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
यसक्रममा हिँडडुल, सवारीसाधन, हाटबजार र मेलाजात्रा सबै बन्द गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । औषधि पसल र अस्पतालबाहेक अन्य सबै पसल बन्द रहनेछन् । निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल का रवाही गरिने प्रजिअ कटुवालको भनाइ छ ।
यसअघि स्थानीय प्रशासन ९जिल्ला प्रशासन ले सीमित क्षेत्रमा नि षेधाज्ञा जारी गरेको भए पनि जिल्लाका स्थानीय तह र उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा बर्दिवास, भङ्गाहा, गौशाला, औरही, लोहारपट्टी र बलवासहितका नगरपालिका क्षेत्रमा साप्ताहिक हाटबजार साउन २१ यता बन्द गराउँदै आएका थिए । ती प्रयत्न प्रभावकारी नभएपछि जिल्लाभरि नै नि षेधाज्ञा लागू गर्न स्थानीय प्रशासनलाई दबाब बढेको थियो ।
महोत्तरीमा को भिड–१९ स ङ्क्रमणबाट हालसम्म दुई जनाको मृ त्यु भइसकेको छ । जिल्लामा सोमबार साँझसम्म एक हजार ८८ मा स ङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
यसमध्ये १२ जनामा सोमबार स ङ्क्रमण पुष्टि भएको कार्यालयका को भिड–१९ रो कथाम अभियानका स्रोत व्यक्तिसमेत रहेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक गिरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दि नुभयो। जिल्लाका स ङ्क्रमितमध्ये ३७० जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका कार्यालयले जनाएको छ ।